2 Methods si ay u gudbiyaan Photos ka iPod in iPad, iyo iPad in iPod
Synching iyo sawiro wareejinta ka iPod in iPad, iPod ama ka iPad in ay u muuqdaan kuwo laga yaabaa in ay u hawl dhib. Wixii qof ayaa sheegtay in ay gabi ahaanba qalab iyo bixio internet ahaan, shaqadan ka muuqan doonaa ka yar oo adag. Si aad wax sahlan, halkan jira laba jid oo sahlan oo ku saabsan sida si guul leh oo si fudud u isticmaali Wondershare MobileTrans oo Photo Stream in ay sawiro ka iPod wareejiyo iPad iyo sidoo kale ka iPad in iPod.
Habka 1. Isticmaal MobileTrans si ay u gudbiyaan Pictures ka iPod in ay iPad iyo iPad in iPod 1 Click
Habka 2. Isticmaal Photo Stream si ay u gudbiyaan Photos ka iPad in iPod iyo iPod in iPad u Free
Bedelka sawiro ka iPod in iPad, iyo iPad in iPod, in mid ka mid click.
Ka sokow photos, music, jadwalka taariikhda, video iyo xiriirada, iMessages la mid aad u wareejin karaa.
Full la jaan qaada hawada iPad, iPad la isha bandhigay, iPad 2, iPod xiriiri 5 oo dheeraad ah oo ay ku macruufka 9/8/7/6/5.
Tallaabada 1. Ku rakib iyo Run MobileTrans on Computer
First of dhan, download iyo rakibi version saxda ah ee MobileTrans on PC ama Mac. Waxa maamula. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan labada iPad iyo iPod taabto si PC ama Mac. Your iPad iyo iPod xiriiri dhowaan la aqoonsan doono. In uu furmo suuqa hoose, dooran Photo in hab Transfer Phone. Markaas, waxaad arki doontaa labada iPad iyo iPod waxaa halkaas ku cad.
Fiiro gaar ah: iPod halkan waxaa loola jeedaa iPod taabto. Wondershare MobileTrans Taageero iPod xiriiri 5/4/3 socda ee macruufka 9/8/7/6/5.
Tallaabada 2. Nuqul Photos ka iPod in ay iPad iyo iPad in iPod 1 Click
Sida aad ka arki, dhammaan faylasha loo gudbin karaa waa tickes. Si aad u gudbiyaan sawiro oo kaliya, waxaad ka saari kara calaamado ka hor files kale. Markaas, riix Start Copy. In la cayari hanaanka wareejinta oo dhan, hubi qalab labadaba waa in la xiran waqtiga oo dhan.
Xulashada 1. Calan Transfer Automatic Photo u dhexeeya Qalabka aad
1. aad iPad ama iPod, bandhigista Settings . On screen tan, waxaad u baahan tahay in aad eegto, waayo, Photos iyo Camera doorasho. Tag My Photo Stream inuu ka soo leexdo Doorashadan ON , taas oo ka dhigi doonaa wareejinta iyo synching sawiro aad u qalab kale oo ka fudud tan iyo kani waxaa samayn doono si toos ah. Si aad u hubiso in aad iPod si sax ah loola xiriirinayay, raac tallaabooyinka kor ku xusan.
2. Aayad in iCloud labada iPad iyo iPod. On aad iPad iyo iPod, riix Settings app, ka dibna dooran iCloud . Waxaad sidoo kale si loo hubiyo in aad leedahay aqoonsi ah oo ka shaqeeya Apple inay amarka awood.
Xulashada 2. Calan Qalabka Your in Gacanta Dooro iyo Bedelka Photos in kale kasta
Haddii aad rabto in tiro ka mid ah loo doortay ama ururinta photos in lagu wareejiyo ka iPod in iPad ama bilcaksii, waxaa laguu xilsaaray doontaa inaad tan sameyso gacanta iyadoo la abuurayo sawir il amar this:
1. Marka hore, waxaad leedahay si aad u hubiso haddii Photo Stream doorasho ayaa karti on your iPad iyo iPod labadaba. Waxaad gacanta hagaajin karo taas oo ay helaan Settings > Photos iyo Camera > Wadaago Photo durdurro oo shid.
2. Si habboon u dhigay ilaa Photo Stream kuu gaar ah si ay ula wadaagaan ama sawiro aad ka iPod ama iPad wareejiyo mid kale. Halkan, waxaan qaadano tusaalaha ku saabsan sida loo sawiro ka iPod wareejiyo iPad. Waxaad ku samayn kartaa adigoo raacaya tallaabooyinka soo socda:
Access Photos app aad iPod.
Tuubada doorasho Photo Stream (Waa goob lagu caweeyo oo siman)
Tuubada + badhanka ku yaal geeska ugu wada sarreeyey bidix ee shaashadda. Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u abuuraan Photo Stream kuu gaar ah.
Dooro magac ku qor si aad u Photo Stream oo ka dhacay Samee . Waxa kale oo aad go'aan ku gaadhi kartaa in aad jeceshahay in aad Photo Stream in la heli karo in ay dadweynaha ama aan.
3. Waxaad hadda bilowdo in aad ku darto sawiro ku saabsan Photo Stream.
Tubada Edit si ay u awoodaan in ay doortaan sawirada aad jeclaan lahayd inaad la wadaagto ama kala iibsiga.
Tubada Share .
Dooro Photo Stream on menu gujisid iyo mid ka mid ah oo aad jeclaan lahayd in ay sawiro daro in la doorto.
Maamul il sawirka ay ku daray dheeraad ah ama la tirtiro sawiro.
IPhoto wareejiyo iPad si fudud
Bedelka Photos ka iPad si Mac
A Guide Full in aad nuqulka Photos ka iPhone in iPad
Photos ka Mac dhaqaaq iPad
3 Siyaabaha Bedelka Photos ka iPad in PC
3 Siyaabaha Bedelka Photos ka PC in iPad
Sida loo saar Audio ka MOV Files (Quicktime) ee Windows / Mac
> Resource > Transfer > 2 Methods si ay u gudbiyaan Photos ka iPod in ay iPad iyo iPad in iPod